ပြည်ကြီး တံခွန်မြို့နယ်တွင် ဘေးမဲ့နွားများ လှူဒါန်းကျွေးမွေးပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်၍ အလှူရှင်မ - Yangon Media Group
ပြည်ကြီး တံခွန်မြို့နယ်တွင် ဘေးမဲ့နွားများ လှူဒါန်းကျွေးမွေးပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်၍ အလှူရှင်မ
မန္တလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့ နယ် တံခွန်တိုင်ရပ်ရှိ နွားဘေးမဲ့ရုံမှ နွားများလှူဒါန်းကျွေးမွေးပွဲကို ”သဒ္ဓါခိုင်မြဲနွားဘေးမဲ့ပွဲ”အမည် ဖြင့် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် နွား ဘေးမဲ့ရုံဂေါပကအဖွဲ့က ဦးဆောင်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်၍ အလှူရှင်များ လာရောက်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
တံခွန်တိုင်နွားဘေးမဲ့ရုံကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဟိန္ဒူလူမျိုးများက တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ယခုအခါ ဂေါပကအဖွဲ့မှ တာဝန်ယူထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်မွေးမြူလျက်ရှိ ပြီး နွားဘေးမဲ့ရုံတွင် နွားကောင် ရေ ၁၂ဝ ရှိရာ အဆိုပါနွားများအ စားအစာကျွေးမွေးထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်မှုကို အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းများထားရှိကာ ကျန်းမာရေးအတွက် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်များမှ အပတ်စဉ်သတ်မှတ်ရက်များတွင် လာရောက်စစ်ဆေးကု သပေးလျက်ရှိသည်။
”မနှစ်က နွားကောင်ရေ ၈ဝ လောက်ရှိတယ်။ နွားတွေကို ပြောင်း ရိုးစင်းဖတ်၊ နှမ်းဖတ်စတဲ့အစား အစာကျွေးမွေးပါတယ်။ တစ်နှစ်တာကျွေးမွေးထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်မှုစရိတ် ကျပ်သိန်း ၃ဝဝ ကျော်ရှိတယ်။ ဒီနှစ်နွားကောင်ရေ ၁၂ဝ အထိ တိုးချဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်တာမို့ ကျပ်သိန်း ၅ဝဝ လောက်ကုန်ကျမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အလှူရှင်များရဲ့လှူဒါန်း မှုကြောင့် အခုလိုရေရှည်စောင့် ရှောက်နိုင်တာဖြစ်လို့ အလှူရှင် တွေသိအောင် လာရောက်လှူဒါန်းနိုင်အောင် အခုလိုဘေးမဲ့နွားများ လှူဒါန်းကျွေးမွေးပွဲပြုလုပ်တာပါ”ဟု နွားဘေးမဲ့ရုံဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘရမ်းကပြောသည်။
နွားဘေးမဲ့ပွဲကို အဆိုပါနေ့ နံနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအ ထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်သောကြောင့် ရပ်နီးရပ်ဝေးအလှူရှင်များအနေ ဖြင့် ဖုန်း-ဝ၉-၅ဝ၁၆၃၈၈၊ ဝ၉-၂ဝဝဝ၈၂ဝ၊ ဝ၉- ၂၅၉ဝ၂ဝ၂ဝ၉ တို့ သို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော် ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲကြောင့် မန္တလေးဈေးကွက်တွင် ပစ္စည်းကောင်းရှားပါး၍ တရုတ်ကုန်
နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အရပ်ဘက် စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေးမှာ တိုက်ရိုက် ပတ်သက်နေသည့် အတွက် ဆွေးေ??
မုံရွာမြို့လယ်တီကျောက်စာတိုက်တွင် ကျောက်စာချပ်အသစ်နှစ်ချပ် တိုးရေးထိုးထား
သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် ထပ်မံရွေးကောက်ခံရသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အလံများ၊ ကော်ဇောများဖြင့် အနီေ
သဘင်လေးရပ်သမိုင်းဝင်အငြိမ့်မင်းသမီးကြီး မထွေးလေး၏အုတ်ဂူကို တံတားဦး မြင်းဝန်သုသာန်မှ နွ??
မောင်တောမြို့နယ်၌ မွတ်စလင်လူမျိုး ၆၃ ဦး တင်ဆောင်လာသည့် စက်လှေတစ်စင်းနှင့် လှေလုပ်သားလေးဦး ဖမ်းဆီးရမိ
ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ၏ ချစ်သူကို ချိန်းတွေ့ရန် ကြိုးစားခဲ့၍ ဂျူဗင်တပ်မှ ထွက်ခဲ့ရဟု ပါရီကတ် ဆို